I-Synechia - oko kuthiwa ukunamathela okanye ukunamathela phakathi kwamalungu angamelwane, bobabili bafumana kwaye bazalwa. Ngokuqhelekileyo oku kwenzeka emva kokuvuvukala. Amantombazana emncinci omncinci angaba ne-synechia ngohlobo lwe-fusion ye-labia minora, kwaye ngamanye amaxesha amancinci ane-labia enkulu. I-synechia inokubunjwa xa i-labia ihlanganiswa phezu komnyango we-urethra, ngaloo ndlela ibangela ukungazinzi kwaye yenza kube nzima ukuvota. Ngokuqhelekileyo abazali abazange bathathe ingqalelo yokuba umntwana unento engalunganga. Indlela yokuphatha i-synechia kumantombazana, siya kuthetha ngale nqaku.
Izizathu zokwakha i synechia
Enye kunye nezona zinto ziqhelekileyo zezizathu zesifo, ngokukrakra ngokwaneleyo, ukucoceka okunzulu kakhulu. Ngako oko, musa ukuhlamba umntwana rhoqo kunye namaxesha amaninzi ngosuku, ngokukodwa ngokusetyenziswa kwesepha. Kwiintombazana ezincinci, iimbumba ezinamaqabunga ezitho zomzimba zincinci kakhulu, kwaye ukutshatyalaliswa rhoqo, umphumo wesepha kunye nokugqokra kweengubo ezinxibeleleyo kubangela ukulimala. Xa i-mucosa iphilisa, i-labia mucus ivela. Kodwa ungacingi ukuba ngenxa yoko kufuneka uhlalise umcoceko. Ukuqhaqha kwelabi kwintlalo engahlambulukanga kwenzeka kaninzi.
Esinye isizathu sokubunjwa kwamantombazana kwi-synechia sinokusulelwa kwintsholongwane engena kwi-urinary tract. Iibhaktheriya ezinobungozi zingena kwi-membrane enobunzima bezitho zomzimba, kubangela ukuvuvukala, okukhokelela ekupakeni. Ukuze uphephe iimeko ezinjalo, zama ukufumana iimvavanyo eziyimfuneko zomchamo womntwana.
I-Synechia inokubonakala kwaye kunye nokuvuvukala ixesha elide kwizitho zangasese, umzekelo, nge-vulvovaginitis. Esi sifo senziwa ngenxa yokusuleleka ngesondo. Emva koko, zithunyelwa ngezo zesini kunye nezindlela zendlu. Kwaba ngabazali ngamanye amaxesha bayabangela ukusuleleka kwezesondo, umzekelo, oku kwenzeka ngexesha lokubeleka, xa usuleleko oluvela kumama ludluliselwa umntwana. Kwiimeko ezinjalo, intombazana inokufumana isifo esingapheliyo. Ekubeni iindawo ezinobungozi ezinobungozi ezinjengommandla omanzi, umthombo wentsholongwane unokuba ngamanye amathuwa, iingubo ze-woolcloths, njl njl. Ngoko ke, iingubo zangaphantsi zezingane kufuneka ziqhekeke kwizinto zabantu abadala, kwaye kuyafuneka ukuba ubilise. Emva kokuhlamba, zama ukuhlamba impahla yokuhlambela ngesinyithi eshushu. Ukuhlamba kwamanzi angokwemvelo kungasongela ukufumana intsholongwane.
Ithuba elikhulu kakhulu lokuphuhlisa i-synechiae kwizifo ezihlaselayo. Emva koko, bavame ukubonakaliswa esikhumbeni, kwaye abazali abaninzi abawunaki umva. Kule nkalo, abazali ababenabantwana abanokuziphendulela kunye ne-diathesis kufuneka banamathele ngakumbi kwi-mucosa yentombazana. Ukuze kungabangela ukuba kungabikho komzimba, phelisa kwimveliso yokutya ephazamisa ukubola.
Ngokuqhelekileyo xa ukukhulelwa kwengxaki kuvelisa i synechia. Oku kungenxa yokusuleleka kwi-intrauterine kunye neengcambu zakhe. Ukuba bekukho iingxaki, ngoko kuyimfuneko ukutyelela umgulane wezintlu xa intombazana ijika enye ubudala.
Iimpawu ze synechia
Xhalela ugqirha wakho xa ufumanisa naziphi na iziphoso kwisakhiwo se-genitalia.
Ukuba uqaphela ukuba intombazana ayifuni ukuhlala phantsi ngobumbano kwaye ingenangqondo, yile isisayina sokuqala ukuvakala i-alamu. Ukuba kukho ubunzima bokungcambuza kwaye akukho nto ibuhlungu, ngoko kufuneka uqhagamshelane nodokotela.
Zama ukwethula kulo mgaqo uviwo oluqhelekileyo lwezesondo zomntwana kunye neenkqubo zokuhlanzeka. Ukuba kukho ukukhutshwa, ubomvu, ukucaphuka, kuyimfuneko ukudibana nodokotela kwaye uqale unyango olufanelekileyo.
Iziphumo ze synechia kumantombazana
I-Synechia ingakhokelela kwiingxaki ezinkulu. Ukongezelela, ukuba esi sifo singaba sisigxina, sinokukhula. Ngenxa yokukhula kwelabi, inkokhelo yengane ingahlakulela ngokungalunganga, kwaye ngenxa yoko, iholele ekudakaleni kwemisebenzi yomzimba (ukungabikho, ukungathinteka, njl njl).
Xa u tyelele umgulane wezilwanyana, ugqirha kufuneka ahlolisise izitho zomzimba zentombazana. Ukuba kuyimfuneko, kufuneka udlulise iimvavanyo ezifunekayo: i-smears, ukuhlwayela i-pathogenic flora, iimvavanyo zokusuleleka. Kwakhona, ugqirha unokumisela i-ultrasound ye-pelvis encinci.
Unyango lwe synechia
Phatha i-synechia iyimfuneko. Ukuzinyonga kukulungele ukujongana. Indlela yokwenza ngokuchanekileyo, ugqirha uyakukuxelela emva kokufumana iziphumo zovavanyo kunye noviwo. Ukuba ukuxhaswa kufunyenwe ngexesha, ngoko unyango lunokuncitshiswa kwaye i-ointment ekhethekileyo isetyenzisiweyo, apho ilabia iya kuchitha khona. Ukuqaliswa kwamacala afanayo kuphela iindlela zokucoca.
Indlela yokwandisa ukukhuseleka kwezilwanyana zomntu?
Stomatitis kubantwana: unyango ekhaya
Unyango lwentsholongwane eqinile kwintsana
Amachiza anobungozi: indlela yokuphathwa ngayo, kungekhona ukugula
Mumiye: iipropati nezindlela zokonyango
U-Olga Buzova watshata ngasese waza wanika umyeni wakhe izipho
Indima yabasetyhini kwishishini laseRussia
Izimonyo zonyango - izimonyo
Isobho se-Lentil nesipinashi
Kunokuphatha i-hypertone yodonga lwangemva lwesisu?
Imiqulu yeengulube kunye nokuzaliswa kweshizi
Ukhetho olufanelekileyo lomatshini wokuhlamba